"Education for Myanmar Youths": ကျွန်တော်ကြိုက်သော စာမေးပွဲ စံနစ်တစ်ခု
ကျွန်တော် ကြုံလိုက်ရတဲ့ စာမေးပွဲ စံနစ်လေး တစ်ခုကို ပြောပြ ချင်ပါတယ်။ စာမေးပွဲခန်းမှာ စာသင်တာ ကြုံဖူးကြပါသလား ခင်ဗျာ။ အင်မတန် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ နည်းလေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဋ္ဌာန က လုပ်တာပါ။ တစ်ခြားမှာ ရှိမရှိတော့ မသိပါခင်ဗျာ။
ဒီမှာ စာမေးပွဲဖြေရင် ဆရာတချို့က equations များကို open လုပ်ပါတယ်။ လုပ်ပုံကလဲ ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်အသုံးလိုမယ်ထင်တဲ့ equations များကို blackboard မှာ မည်သူမဆို ထွက်ရေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါက open book system ထက်ကို ပိုကောင်းပါတယ်။ အားလုံး တပြေးညီ ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ နို့မို့ဆို စာအုပ်စုံတဲ့သူက သာနေမှာလေ။
မေးခွန်းတွေကို ဆရာ့ဆီမှာ သွားရွေးရပါတယ်။ မှောက်ထားပါတယ်။ တစ်စောင်ကို ၃ ပုဒ် လောက် ပါလေ့ရှိပါတယ်။ များများစားစား တွက်ရတယ်လို့ မရှိပါ သီအိုရီသိရင် လက်တန်းတွက်လို့ရပါတယ်။ ဂဏန်းတွေက စိတ်တွက်နဲ့တွက်ရအောင် လွယ်တာပဲပေးထားပါတယ်( အင်ဂျင်နီယာ ၃ ၄ ၅ တန်းများ )။ ပြီးတော့ တချို့ လူများက စာအုပ်များ ခိုးကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ အချင်းချင်း တိုင်ပင် တတ်ကြပါတယ်။ တချို့ ဆရာနဲ့ဆိုမရပါ။ အဲ မပြောတဲ့ ဆရာက ပိုဆိုးပါတယ်။ စစ်ပြီဆိုရင် ဆရာ ၃ ၄ ယောက် စစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေက အဖြေလွှာကို ထပ်လို့ မရပါ။ လူကိုယ်တိုင် အမေးခံရပါတယ်။ မေးခွန်း ၃ ခု ကို ဆီမက်စတာ တစ်ခုလုံး သင်ထားသမျှ ကနေ အကုန်လုံး စုံအောင် မေးပါတယ်။ ခိုးသာချထားရင် အရမ်းသိသာပါတယ်။ တစ်အုပ်လုံးကို မလေ့လာထား စာမကျေထားရင် ဘာမှ မဖြေနိုင်ပါ။ ဆရာ က မဖြေနိုင်ရင် သေချာရှင်းပြပါတယ်။ ပုံဆွဲပြ ရှင်းပြနဲ့ တစ်ယောက်ချင်း အနီးကပ် သင်သလိုပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ တစ်နှစ်လုံး မသိတာတွေကို တစ်ထိုင်တည်းသိသွားရပါတယ်။ အဲလို မဖြေနိုင်ရင်တော့ ထပ်ဖြေကြရပါတယ်။ ထပ်ဖြေရမှာ ကြောက်စရာပါ။ ဒုတိယအကြိမ်ဆို အသည်းအသန် စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်တွေ မေးတာကိုးဗျ။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းကို မိနစ် ၃၀-၄၀ ပေးပြီး စစ်တာပါ။ ဂရိတ် ၅ ပေးချင်တဲ့သူတွေကိုတော့ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆို ဆရာ စားပွဲမှာထိုင်ပြီးတာနဲ့ ပထမဆုံး ထဖြေလေ့ရှိပါတယ်။ စောင့်ရတဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ပါ။ ရေးဖြေက ပုံလေး ဆွဲထား အီကွေးရှင်းလေး ရေးပြီး ပွိုင့်လေး တွေ နဲနဲ ပဲ ရေးထား တာပါ။ ဘယ်လောက် ရေးထားထား ထပ်မေးမှာ ကို သိနေတာကိုး။ တစ်ခါက ဆရာမေးတာတစ်ခုကို မသိလို့ ဆရာက အခြေခံသီအိုရီတွေကနေ အဲဒီ အထိ ရောက်အောင် ပြန် စဉ်းစားခိုင်းနေတာနဲ့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းကို ၁ နာရီလောက် ကြာသွားပါတယ်။ ချွေးတွေဆိုလဲ ဇီးကင်းလုံးလောက်ကို ကျနေတာပေါ့။ အဟဲ။ နောက်မှ ဆရာကပဲ တစ်ဝက်ကို ရှင်းပြပေးလိုက်မှ သိသွားတာပါ။ ပေးတဲ့ အမှတ်ကို မကြိုက်ရင် နောက်တစ်ခါ ပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်။ ပြန်ဖြေရင်တော့ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ပြန်ဖြေသူများ က စာ ပိုတတ် သွားလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီစံနစ်လေးကို သဘောကျပါတယ်။ ဆရာတွေတော့ သေအောင် ပင်ပန်းကြပါတယ်။ အမှတ်ကို ဖြေပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းပေးပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ စာမေးပွဲဖြစ်ဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ သင့်တော်အောင် ပြောင်းလဲ သုံးရင် ရမယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်းခင်ဗျား။
: Info - Personal Accounts
Posted by ဘလူးဖီးနစ် at 5:46 PM
ကိုအောင်ဝင်း.. ဒီစာမေးပွဲ စနစ်မျိုး တခါမှ မကြုံဖူးသေးဘူး .. စိတ်ဝင်စားစရာပဲ ။ မေးခွန်းတချို့ ဖြေပေးပါလား ..
(၁) ဒါက ဘယ်လို အတန်းတွေမှာ ဒီလို စာမေးပွဲမျိုး လုပ်လဲ (ဥပမာ.. Is it only for PhD classes or all levels? Is it only for engineering courses or all courses? Is it being practiced in all universities?)
(၂) ဒီစာမေးပွဲမျိုးက တနှစ်လုံးမှာ ဖြေရတာ ဒီဟာပဲလား ။ တခြား စာမေးပွဲ ရှိသေးလား ။ တခြားစာမေးပွဲတွေ ရှိသေးရင် ၊ ဘယ်လို % တွေနဲ့ ခွဲဝေပေးတာလဲ ။
(၃) ဒီလို စာမေးပွဲမျိုးအတွက် ဘယ်လို အမှတ်ပေးစနစ် ကျင့်သုံးပါသလဲ ။ ဂျစ် အထင်တော့.. များ၂ ဆရာက ဂိုက် လုပ်ပေးရလေ.. အမှတ်နည်းလေ ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်တယ် ။
(၄) ဘယ်နခါအထိ ဖြေဆိုခွင့် ရှိပါသလဲ ? ဒီလို စာမေးပွဲမျိုး တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါပဲ လုပ်တာလား ။
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပို့စ်တခုအဖြစ် ရေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ။ အားလုံးတွက် ဗဟုသုတ ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။